राष्ट्रपतिलाई नैतिक संकट, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीवाट सपथ लिने कि नलिने ? « Light Nepal
राष्ट्रपतिलाई नैतिक संकट, प्रधानन्यायाधीश पराजुलीवाट सपथ लिने कि नलिने ?
Published On : 13 March, 2018 2:22 pm
काठमाडौँ, २९ फागुन । मंगलवार राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइरहेको छ । मंगलवार नै निर्वाचन सम्पन्न भएर मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति पाउंदैछ । तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले अयोग्य ठहर्‍याएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबाट शपथ लिने कि नलिने भन्ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई नैतिक संकट सिर्जना हुने भएको छ ।
नवनियुक्त राष्ट्रपतिलाई प्रधानन्यायाधीशले सपथ खुवाउने नियम छ । तर अहिलेका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली किर्ते प्रकरणमा विवादित भएका छन् । सर्वाेच्च अदालतकै न्यायाधीशहरुले उनको गत साउन महिनामै कार्यकाल सकिएको भन्दै उनको इजलासमा नबस्ने घोषणा गरीसकेका छन् । अन्य न्यायाधीशहरुले पनि पराजुलीलाई विदामा बस्न सुझाव दिएका छन् ।
राष्ट्रपतिमाथि नैतिक संकट पर्ने भएपछि यो विषयलाई वामगठबन्धनका शिर्ष नेताहरुले गम्भिर रुपमा लिएका छन् । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डवीच यस विषयमा कुराकानी भएको छ ।
परिणाम घोषणा भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ कार्यकालका लागि शपथ लिएर आफ्नो पदभार सम्हाल्नुपर्नेछ।
पराजुलीले तत्कालै विदामा बस्नु उपयुक्त हुने उनीहरुको सुझाव थियो, तर पराजुली त्यो नगरी मंगलबार पनि नियमित काममा रहेपछि समस्या सिर्जना भएको हो। अबका दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा राष्ट्रपतिको मंगलबारको चुनाव सकिएपछि थप कुराकानी हुने सम्भावना रहेको एक नेताल जानकारी दिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले सोमबार पराजुलीले किर्ते गरेर अहिले पदमा बसिरहेका भन्दै इजलासबाट आफ्नो राय सुनाएका थिए। पराजुलीको जन्ममिति अनुसार, उनी गत साउनमै पदमुक्त भइसकेको घोषणा गर्दै जबराले कान्तिपुर र गोविन्द केसीमाथि परेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको बृहत इजालास बस्न अस्वीकार गरेका थिए।